China Usb-C hub-CH08A ifektri abakhiqizi | Iqembu leBrocade
▪ Bi-rocade AI I-8 ku-1 USB Type C Hub ihabhu elenza imisebenzi eminingi ikhulisa ukuxhumana okulinganiselwe kwe-laptop.
▪ Kubandakanya i-3 * USB 3.0, 1 * HDMI, 1 * 3.5mm audio, 1 * TF slot slot kanye ne-1 * SD slot slot nokusekela ukushaja kwe-PD.
▪ [Yenza Umsebenzi Wakho Usebenze Ngokuzikhandla]: Uhlobo Lwehabhu elihlanganiswe neshaja engenantambo lingenelisa zonke izidingo zokudluliswa kwedatha, ukuqapha ukunweba nokushaja okungenantambo. Izimbobo ezimbili ze-3.0 USB namakhadi we-SD / TF Reader asekela amazinga wejubane lokudlulisa afinyelela ku-5 Izikhala.
▪ [Ukukhishwa Kwevidiyo Ekhwalithi]: Mirror noma nweba isikrini sakho ngembobo ye-4K HDMI ye-adaptha ye-USB C bese usakaza i-4K UHD noma ividiyo ephelele ye-HD 1080P ku-HDTV, ukuqapha noma iprojektha. Zilungiselele ukujabulela idili lakho lokubukwa elifana nesinema uhlobo c hub oluletha kuwe.
▪ [Ukuxhumeka okuzinzile nokunokwethenjelwa]: Ngenxa ye-PD3.0, ukuxhumana phakathi kwama-laptops ne-USB C Adapter kuzinza kakhudlwana. Akusekho ukukhathazeka ngokulahleka kwedatha lapho ukhipha ikhebula lokushaja. Ukusekela PD ukushaja at max 60W.
Isivinini Esiphezulu Nokusebenza Kakhulu
Ukudluliswa kwedatha yamachweba we-USB 3.0 kushesha kuze kufike ku-5Gbps, isifundi sekhadi le-SD / TF esihlinzeka ngejubane elifinyelela ku-90MB / s, ngokushesha okukhulu kunabafundi abaningi bamakhadi emakethe. Nweba isikrini sakho ngembobo ye-HDMI ku-HDTV, ukuqapha noma iprojektha. Sekela ukuphuma kwe-HDMI kuze kufike kusixazululo se-4K UHD (3840x2160 @ 30Hz)
Ukulethwa kwamandla kuhlanganisiwe
Imbobo yokushaja yohlobo-c ingadlula ngamandla afinyelela ku-100w, futhi inikeze amandla ongezelelekile kwi-hard disk, umshayeli we-DVD nezinye izinsimbi ezixhumeke ethekwini le-USB
Isitayela seMac Design
IHub iza nezinto ezisezingeni eliphakeme ezibushelelezi ze-aluminium ne-Uni-body Case. I-anti-fingerprint, ukushabalalisa ukushisa, ukuklanywa okulula nokuhlangene. Inkomba ye-LED ehlanganisiwe. Ihabhu landisa ukuxhumana kwamadivayisi akho futhi lilondoloze isikhala.
Ngemikhiqizo esezingeni lokuqala ye-USB C, insizakalo enhle kakhulu, ukulethwa okusheshayo nentengo enhle, sizuze amakhasimende adumisa kakhulu amazwe angaphandle '. Imikhiqizo yethu ye-USB C ithunyelwe e-Afrika, eMiddle East, e-Southeast Asia nakwezinye izifunda.
Inhloso yebhizinisi: Ukwaneliseka kwamakhasimende kuyinjongo yethu, futhi sithemba ngobuqotho ukusungula imigomo emide yobudlelwano bokusebenzisana namakhasimende ukuthuthukisa imakethe ngokuhlanganyela. Ukwakha okukhazimulayo kusasa ndawonye! Inkampani yethu ibheka "amanani afanele, isikhathi sokukhiqiza esisebenzayo kanye nensizakalo enhle emva kokuthengisa" njengohlelo lwethu. Sithemba ukubambisana namakhasimende amaningi ukuze kuthuthuke kanye nezinzuzo. Samukela abathengi abangaba khona ukuthi basithinte.
Ukunikezela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, insizakalo enhle kakhulu, amanani wokuncintisana kanye nokulethwa okusheshayo. Imikhiqizo yethu ithengisa kahle ezimakethe zasekhaya nezangaphandle. I-Brocade izama ukuba ngumhlinzeki owodwa obalulekile e-China.
I-Brocade Smart Space inikeza ububanzi obugcwele kusuka ekuthengisweni kwangaphambi kokuthengiswa kwensizakalo yokuthengisa ngemuva, kusuka ekuthuthukisweni komkhiqizo kuya ekucwaningeni ukusetshenziswa kwesondlo, ngokuya ngamandla amakhulu wezobuchwepheshe, ukusebenza komkhiqizo osezingeni eliphakeme, amanani entengo afanele kanye nensizakalo ephelele, sizoqhubeka nokuthuthuka, ukuze hlinzeka ngemikhiqizo nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme ze-USB C, futhi ukhuthaze ukubambisana okuhlala njalo namakhasimende ethu, ukuthuthukiswa okuvamile nokwakha ikusasa elingcono.
Isikhala seBrocade Smart sigcina umoya "wokuqamba izinto ezintsha, ukuvumelana, ukusebenza kweqembu nokwabelana, imikhondo, inqubekela phambili ebambekayo". Sinikeze ithuba futhi sizofakazela amandla ethu. Ngosizo lwakho lomusa, sikholwa ukuthi singakha ikusasa eliqhakazile nawe ndawonye.
Langaphambilini Usb-C ihabhu-CH07A
Olandelayo: Usb-C ihabhu-BX4H
Izinto I-Aluminium Alloy enenqubo ye-Apple CNC
2 * i-USB3.0 Kuze kufike ku-5Gbps
1 * Uhlobo C Kuze kufike ku-5Gbps
1 * i-HDMI Kuze kufike ku-4K UHD (3840 × 2160 @ 30Hz) / 1080p / 720p
1 * Izikhala ze-SD Kuze kufike ku-90MB / s
Izikhala ze-TF Kuze kufike ku-90MB / s
Ukulethwa kwamandla 20V / 3A Max 60W
Imibala Isikhala Esimpunga / Okuluhlaza / Yamukela Ukwenza Ngokwezifiso
Ukuxhaswa Kwesistimu Window7 / 8 / 8.1 / 10, Mac OS x v10.6 nangaphezulu kwe-OS
Xhuma futhi udlale Akunasidingo Sokufaka Umshayeli
Ubukhulu （ngephakheji） 161 * 90 * 22 mm
Isisindo 63 g
Isisindo （nephakheji） 90 g
I-OEM ne-ODM I-OEM ne-ODM
Isampula yamahhala khokha isampula
Usb C ihabhu